Ranomasina miafina any Puerto Rico | Vaovao momba ny dia
Tora-pasika miafina any Puerto Rico
Ranomasina sy ranomasina | | Tsy misy sokajy
Ny sasany amin'ireo tsara indrindra Torapasika Puerto Rico tena takona afenina tokoa izy ireo. Ny toerana malaza mpizahatany sy fanta-daza dia mora fantarina sy azo zahana amin'ny toerana rehetra eto amin'ny firenena. Na izany aza, ireo izay hofidinay ato amin'ity lisitra ity dia tsy izany. Matetika izy ireo dia toerana tsy dia be olona nefa tokony ho hitanao mba hahazoanao ny fahatsapana tsara indrindra an'ity firenena ity.
Manomboka amin'ny Nosy Culebra, paradisa manokana izay ahatongavan'ireo mponina amin'ny sambo na fiaramanidina hankafy ny torapasika mitokana ao aminy. Ny malaza indrindra amin'ny rehetra dia Playa Flamenco, fa izahay kosa manome toky an'i Punta Soldado sy ny fomba fijery kanto ny Nosy Vieques. Etsy ankilany, toerana tsara hisitrihana. Ao anaty Vieques afaka mandeha any Sombe ianao, fantatra amin'ny anarana hoe Sun Bay, morontsiraka miendrika voninkazo tsara tarehy. Tena tsara torohevitra ihany koa ny Boquerón Spa ao Cabo Rojo, seranana piraty taloha izay misy ny morontsiraka fotsifotsy maro sy rano turquoise.
Ary koa ao amin'ny Isla Culebra anananao Nosy Culebrita, nosy haran-dranomasina kely izay ao anatin'ity nosy ity. Misy morontsiraka enina eo amboniny ankoatr'i Playa Tortuga, toeram-pialofana voajanahary any amin'ny farany avaratra izay onenan'ireo sokatra marobe. Ny morontsiraka avaratra amin'ity nosy ity dia feno lagonosy kely handro, na dia tsy maintsy miantsena aza ianao satria be vato.
Roa kilometatra monja miala an'i San Juan de Puerto Rico no Morontsiraka Piñones, toerana tsara handrobohana sy handehandehanana eny amin'ny promenade. Toerana miafina hafa no hisy Green beach ao amin'ny Vieques, fananana taloha an'ny tafika an-dranomasina amerikanina, na Hidden Beach any Fajardo, morontsiraka izay, araka ny anarany, dia tafasaraka amin'ireo ivom-pizahantany. Mila mandeha roa kilometatra eo ho eo mamaky ny honko ianao vao hahatratra azy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tora-pasika miafina any Puerto Rico